Zava-dehibe ny teny — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ary na inona na inona fa misy be dia be nanomboka ho undervalued. Ny zava-dehibe ny zavatra fanovana mifototra amin'ny tena ny zava-. Rehefa misy 100 mofomamy eo amin'ny latabatra taorian'ny asa fanompoana izay mety miresaka foana nandritra ny fotoana kelikely. Fa rehefa misy vitsy monja mofomamy, dia toa sarobidy. Ianao angamba maika erỳ ary raha mahazo ny iray amin'ny fotoana, dia ireo izay manaikitra dia be mamy. Satria renay sy mampiasa ny teny maro toy izany isan'andro tsy midika be dia be ho antsika. Anefa isika dia tokony hahita azy ireo ho sarobidy.
Mety mieritreritra afa-tsy ny tena zava-dehibe hoy isika: dia manan-danja. Angamba isika mieritreritra afa-tsy izay no manoratra, na raha tsy rehefa manana fangadiana resaka na ihany rehefa hilaza izay tena mieritreritra ny teny manan-danja. Heveriko fa ny andininy anio hariva mampita zavatra tena samy hafa. Miverena hiaraka amiko ho any Matthew 12:36.
Fa Izaho kosa milaza aminareo fa ny olona dia tsy maintsy hampamoahina eo amin'ny andron'ny fitsarana ho an'ny rehetra ny teny voahevitra izy ireo no niteny. (Matthew 12:36)
Hoy i Jesosy ireo teny ireo eo afovoan'ny ny resaka tamin'ny Fariseo, rehefa niampanga Azy ny namoaka demonia Satana. Ary toy izany koa i Jesosy nilaza tamin'izy ireo ankapobeny fa ratsy ry zareo, ary tsy milaza na inona na inona afaka tsara (manana-katsaram-panahy miaraka amin'ny teny). Ary nilaza tamin'izy ireo fa ny teny rehetra dia ny vokatry ny inona no miorim-paka ao am-pontsika.
Ary avy eo dia nilatsaka ny baomba anay. Izany no tsy maintsy mamaly amin'Andriamanitra ho an'ny rehetra ny teny voahevitra no lazainay. Tsy ihany no mihatra ny Fariseo. Marina ho an'ny tsirairay avy amintsika. Ary ny andininy manaraka aza mampatahotra kokoa. Hoy izy, "Fa ny teninao no ho afaka madiodio, ary ny teninao no hanamelohana anao. " Fa nahoana? Nahoana no tena zava-dehibe ny teny? Nahoana no ho afa-tsiny, na hohelohina mifototra amin'ny zavatra toy ny tsy misy dikany toy ny teny lazaintsika?
Ataony mazava tsara izany aloha rehefa Hoy izy, "Avy amin'ny tondraka ao am-po no itenenan'ny vava." Efa nahatsiaro ho tsy rariny hotsaraina? Toy ny olona iray dia nahazo anareo tamin'ny ratsy andro very saina ianao, ary nitsara ny toetra amam-panahy manontolo tamin'ny indray andro? Tsara raha tsaraina araka ny teny dia tsy toy izany. Izany dia midika hoe tsy tahaka ny teny dia iray ihany ny toetrantsika lafiny izay tsy mamaritra antsika. Afaka ny ho tsaraina araka ny marina noho ny teny, satria marina fa zava-taratry ny zava-mitranga ao am-pontsika.
Efa ho tahaka izany aho mitazona ny kapoaka, tsy fantatrareo izay no tao ka. Afaka milaza aminareo aho ny rano ao misy, na ranom any any. Fa raha hamandrika sy hanosotra na ranon sasany izay zava-pisotro, ianao mahalala tsara izay no tao ka. Toy izany koa ny amin 'ny teny sy ny fontsika. Rehefa miteny, ny afa-po ny fontsika dia nandraraka avy. Foana ny teny mampiseho inona no ao am-pontsika, na tsara na ratsy. Ary raha Paul Tripp, ny mpanoratra novakiko tamin'ity herinandro ity, nanao hoe:, "Efa tsy niteny ho tsy miandany teny eo amin'ny fiainanao."
Tompon'andraikitra fa ny Teny
Rehetra izao, ary avy eo dia olona iray no tratra tao amin'ny kasety zavatra izy ireo nanao hoe: tsy ho nilaza ampahibemaso. Izany no nitranga tamin'i Filoha Obama rehefa niresaka ny Filohan'ny Rosia. Izany no nitranga tamin'i Mitt Romney tamin'ny herinandro lasa. Tsy manantena ny ho tompon'andraikitra ho an'ireo teny, fa izy kosa no. Toy izany koa, dia mihevitra isika dia tsy ho tompon'andraikitra noho ny teny sasany no miteny. Heverinay no holazaintsika zavatra, ary it's nanao, fa ho avy indray ny hanaikitra antsika. Izany toy ny hoe Andriamanitra dia manana fakan-tsary miafina ny zavaboary rehetra.
Misy andro - ny andinin-teny miantso azy io ny Andro Fitsarana - rehefa hijoro eo anatrehan'ny Mpitsara masina ny izao rehetra izao. Ary rehefa manao ny tenintsika isika dia hijoro eo ho vavolombelona - na nijoro ho vavolombelona ho antsika, na manohitra antsika. Ny porofo dia ho aseho.
Andriamanitra dia mijery ny fomba niteny ny ray aman-dreny toy ny zaza sy ny fomba miresaka amin 'ny vady na ny mpampiasa toy ny olon-dehibe. Andriamanitra no mandinika ny fomba niteny vahiny teny an-dalana. Andriamanitra dia hanadihady ny vazivazy izahay, dia nambaranay amin 'ny mpiara-miasa. Andriamanitra nibango amin'ny alalan'ny tezitra rants amin'ny fifamoivoizana eo amin'ny fiara mba miasa. Ho mihitsy aza izy amin'ny alalan'ny horonan-taratasy ny zavatra izahay mba hampiasaina tao amin'ny Facebook sy Twitter. Na ny teny no mandefa amin'ny hafatra na mailaka. Rehetra teny tokana.
Hitanao i Jesosy dia tsy hoe isika dia tsy maintsy hanome tatitra ho an'ny manan-danja teny lazaintsika. Hoy izy, "Mitandrina ny teny rehetra." Ny teny ampiasaina ho an'ny mitandrina ihany koa adika hoe kamo na tsy misy ilàna azy. ny teny rehetra, na dia tsy misy dikany ny hevitrao no. Ny rehetra-nahalala an'Andriamanitra no niresaka momba izany maraina, mahalala ny teny rehetra hatramin'izay isika niteny.
Ary eto no zavatra. Ratsy fanahy iray monja dia ampy ny teny hanameloka antsika. Izay mazava ho azy dia midika hoe, Isika rehetra dia tokony hohelohina noho ny teny.
Eny ary misy telo teny, tononina avy ny Tompo Jesoa Kristy, izay rehetra mitandrina ny teny supersede hatramin'izay aho niteny. Ireo teny telo ireo: "Izany. dia. Vita. "Rehefa avy niaina ny fiainana lavorary, rehefa avy ihany no nampiasa ny teniny amin'ny fomba izay nanome voninahitra an'Andriamanitra, I Jesoa dia nankany amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa nihantona teo ny hazo fijaliana, dia maty mihitsy aza noho ny fahotana ny teny. Dia nitsangana Izy telo andro tatỳ aoriana.
Ary ho an 'ireo amintsika izay nanao ny finoana an'i Kristy, Eny, misy fampandrosoana teny efa niteny isika fa ny vokatry ny ny fifandraisantsika amin'i Kristy. Ary ireo teny ireo no ijoroako ho vavolombelona amin ny fitia. Fa izahay dia mbola ho nanameloka ny rehetra ny teny hafa. Sy ny fiderana an'Andriamanitra fa ny ran'ny Tompo izy Jesosy mandrakotra ireo teny. Raha tsy mahafantatra an'i Jesosy, hiala amin'ny fahotanao ka matoky irery ihany no afaka mamela anao ho an'ny rehetra ny fahotanareo, anisan'izany ny heloka noho ny teny.
Koa tahaka ny mpino, Na dia tsy hohelohina noho ny teny, Ho isika mbola ho tompon'andraikitra ho azy ireo. Ho isika mbola hamaly amin'Andriamanitra ho azy ireo ary afaka very valisoa any an-danitra.
Ny sasany amintsika dia tena mitandrina miaraka amin'ny vola. Manao teti-bola izahay, no hampifandanjana ny karinen-tseky, mitandrina ny rosia, ary mijery ny aterineto billing fanambarana. Satria fantatsika betsaka any tsato-kazo. Fantatsika fa tsy maintsy dralehilahy, mpikarakara ny vola tsara.
Tsara izany karazana anton'ny, ary ny kajy dia tokony ampiharina ny fomba ampiasantsika ny teny. Satria be dia be any tsato-kazo. Ary dia hamaly an'Andriamanitra noho ny rehetra ny teny. Tokony ho mpitandrina tsara ny teny ampiasaintsika.
Ny teny toy ny tantanana. Afaka mampiasa ny volany mitsingevaheva azy manodidina ka hivadika zavatra. Na dia afaka mampiasa azy ireo hanao zavatra tsara. Ahoana no hampiasanao ny teny tamin'ity herinandro ity? Ahoana no nampiasa ny teny tamin'ny herinandro lasa dia mety hampiseho antsika ny fomba mety hampiasa azy ireo herinandro ho avy ity, raha tsy zavatra fanovana.
Noho izany dia te-hanome fomba telo izay afaka mampiasa ny teny tsara.
I. Miresaha amin'Andriamanitra
Ao amin 'ny 16,000 teny ampiasaintsika isan'andro, dia ho fahendrena ny mampiasa maro ny olona ao amin'ny resaka amin'Andriamanitra. I Jesoa dia nanome antsika ny fidirana ho any amin'ny Ray, ary ho avy fahasahiana eo anoloan'ny seza fiandrianany matetika. Ny mpivady dia mety hanana olana amin'ny hoe mihaino tsara, fa Andriamanitra no tsy. Izy mihaino ny vavaka ataontsika foana. Raha ny tena izy, Mihaino akaiky.
Matetika rehefa isika dia handeha amin'ny alalan'ny zavatra sarotra, ny zavatra voalohany ataontsika fotsiny mamoaka ny namana ny fianakaviana. Na mety fotsiny isika fanakianana mivaivay mamely ny momba izany mafy amin'ny tenantsika. Inona ny fandaniam-teny. Vao tamin'ny herinandro lasa, Aho fitarainana ny vadiko momba ny zavatra izay tena mandrebireby ahy fotsiny ary ka aho ny momba. Ary raha tsy mbola nanaiky na ny fanatitra na torohevitra, izy nanontany ahy fotsiny fotsiny, "Efa Nivavaka momba izany?"Ary ny valiny dia tsy. Aho, dia ho efa miresaka amin'Andriamanitra momba izany. Azo antoka àry fa tsara lavitra mampiasa ny teniko.
Matetika kevitra ny hanampatra manao na inona na inona mihoatra noho ny antsika madder. Izany ny fandaniam-teny indraindray. Fa miresaka Andriamanitra dia tsy ho rava ny teny. Tsy misy tsara kokoa ny fampiasana ny teny. Tsy izahay amin'ny fanaraha-maso, fa Izy no. Koa rehefa mila fanampiana, fotsiny fa tsy ho very saina, tokony hiresaka fotsiny ny iray izay no miandraikitra. Ary raha tsara ho antsika sy ny voninahiny, Izy no hanome antsika ny fangatahana.
Ny sasany amintsika dia mety ho filana ady. Ary rehefa manana olana amin'ny olona, mankany isika zo ny olona mba hikarakara azy. Tokony ho tsaroantsika fa ny miresaka amin'Andriamanitra momba ny toe-draharaha sy ny zava-dehibe kokoa noho ny miresaka mahomby ny hafa. Miresaha amin'Andriamanitra momba ny fifandraisana olana eo anatrehanao miresaka amin'ny hafa. Mangataha Aminy mba hahazo fanampiana sy ny fahasoavana sy fahendrena. Avelao ny lanjan'ny miresaka ny Mpamorona mba mahonona tena anao sy hanampy anao hieritreritra tsara kokoa.
Ary tsy tokony hampiasa ny teny ihany no mba hangataka amin'Andriamanitra ho zavatra. Izany no mahatonga antsika manana vavaka fiderana isaky ny alahady maraina. Tokony hidera Azy fotsiny fotoana sasany. Tokony ho avy miakatra amin'ny fomba miavaka mba hihira ny fiderana. Fotsiny, "Izy Tsara. Misaotra anao Andriamanitra. "Ny fo izay tototry ny fitiavana an'Andriamanitra mahita fomba vaovao sy ny antony vaovao hidera an'Andriamanitra isan'andro. Izy no mendrika ny fiderana.
II. Lazao ny vaovao tsara
Tsy afaka mieritreritra na inona na inona tsara kokoa mba hilaza ny olona iray hafa, noho ny Vaovao Tsara. Andriamanitra no efa niteny amin'izao andro farany izao tamin'ny alalan'ny Zanany Jesoa Kristy. Ary tokony hilaza amin'ny hafa ny momba Azy sy ny zavatra nataony ny.
Romanina 10 dia milaza amintsika fa, "Ny finoana dia tonga amin'ny alalan'ny mandre sy mihaino amin'ny alalan'ny ny Teny 'i Kristy." Toy izao no Andriamanitra mamonjy lehilahy sy ny vehivavy. Rehefa mandre ny Filazantsara ka mandray azy amin 'ny finoana.
Tiako anao ny mieritreritra kely momba ny olona eo amin'ny fiainanao mila mandre ny Filazantsara. Moa iray ao amin'ny fianakaviana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-belona, ny mpanety, dokotera? Inona no olona eo amin'ny fiainanao mila mandre ny Filazantsara?
Tena tsara ho antsika mba hampiasa ny teny hanorina fifandraisana sy ny marimaritra iraisana miaraka amin'ny tsy kristianina namana. Tena tsara ho azy ireo hahafantatra ianao miahy azy ireo. Fa ho fandravana raha toa ka tsy tena mahazo manodidina ny fizarana ny filazantsara amin'izy ireo. Mety ho nampivaloharika raha nanana 10 resaka momba ny politika, fa tsy ny iray momba ny Filazantsara. Mety ho manimba raha nisy resaka momba ny fanatanjahan-tena isan-kerinandro, fa tsy nanana resaka momba an'i Jesosy. Ary miresaka momba ny tenako aho.
Vao haingana, Nanana ny mpianakavy maty. Ary isaky ny mitranga izany, Mampahatsiahy ahy, fa ny sasany izany fotoana Tsara ny miandry, fa indraindray tokony hilaza aho ry namana momba an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Fantatro ny tsy fankatoavana dia tsy afaka hahatanteraka ny drafitra, fa tsy midika ho tsy nankatò tokony. Ary amin'ny fomba rehetra, hanaraka ny fitarihana ny Fanahy, fa fantatrareo fa tsy mitondra antsika Izy mba hanaisotra izay zavatra izay tokony hoe izao. Lazao ny vaovao tsara.
Tsy midika izany hoe tokony ho ny hany fifandraisana amin'ny tsy Kristianina. Fa izany no midika fa tokony hitranga. Angamba tokony hitondra azy ireo any am-piangonana, ary hampiasa ny toriteny toy ny fandefasana ny pad mba hiresaka momba izany. Angamba isika manondro azy ireo ho tsara boky na CD izay miresaka momba ny Filazantsara (ahem, mine). Mitadiava fomba mba hilaza ny Filazantsara.
III. Mampahery ny hafa (G- Grace)
Aza avela hisy zavatra hafa mahasoa lahateny hivoaka ny vavany, afa-tsy izay manampy ho fampaherezana ny hafa ka araka izay ilainy, mba hahasoa ireo izay mihaino. (Efesianina 4:29)
Izay tokony ho fitsipika mitarika ny ankapobeny ho an'ny teny hafa ny olona. Ihany izay manampy ny hafa ho fampandrosoana ny. Toy hoy aho teo aloha, ny teny toy ny tantanana. Tsy mahafoana zavatra na hanao zavatra. Ary misy taonina ny fomba hanorina ny hafa ny.
Jesosy dia milaza amintsika fa ny olona tsy ho velona intsony mofo ihany, fa ny teny rehetra izay aloakan'ny vavan'Andriamanitra 'Andriamanitra. Andriamanitra no efa niteny sarobidy teny. Ary tokony ho nanako ireo teny sarobidy ho samy hafa isika, mahazo vintana rehetra.
Ny fomba iray dia fampaherezana. Mino aho fa izany no zavatra CHBC no miavaka tsara. Izay marina nahazo ahy sy ny vadiko ny vadiko rehefa tonga voalohany. "Ve izy ireo mampirisika ahy fotsiny momba ny fanontaniana Nanontaniako?"Up eo ambanin 'izany dia hoy fampaherezana. manamafy ny hafa. Lazao izy ireo rehefa mahita porofo ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Manamafy ny fitiavanao azy ireo. Manamafy ny fitiavan'Andriamanitra ho azy ireo.
Ny fomba iray hafa, izay manentana ny hafa. Tsy tokony hieritreritra "hanangana" dia midika hoe mitovy amin'ny mahafatifaty, panahy fandevilevin'ny teny. Indraindray manao ny tarehiny tahaka ny mafy, na fanitsiana. Indraindray dia toa mihantsy ny rahalahy na anabavy, ary miantso azy ireo mba hibebaka amin 'ny fahotana. Izany no iray amin'ireo zavatra efa nanao fanoloran-tena ho samy hafa ny atao - mba mandeha amin'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fotoana tsara sy ny fotoana lava volo.
Ary hitranga ho mandalo fotoana be tabataba toy ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ary isika dia sady mila ny fampaherezana sy ny teny sarotra. Ampirisiho ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny Filazantsara. Ampahatsiahivo azy ireo ny zon'Andriamanitra hitondra sy ny hatsarany ary ny fampanantenany. Ary koa hanohitra ny rahalahy sy anabavy mba hiady ny ady tsaran'ny finoana, mba haharitra amin'ny fahatokiana an'i Jesosy. Mila fa.
Ny fomba iray hafa dia afaka manorina ny hafa ny dia amin'ny alalan'ny manome torohevitra tsara. Ny tena mpanapa-kevitra matotra dia ireo izay tsy manapa-kevitra amin'ny fitokana-monina. Aoka ianao ho vonona hihaino ny zava-mitranga ao amin'ny rahalahy na anabavy ny fiainana. Ary hanampy azy ireo hieritreritra ny alalan 'ny fomba' Andriamanitra ho azy ireo namaly. Ary manome torohevitra ara-baiboly.
Etsy andaniny, amin'ny maha-fiangonana, manao ny asa lehibe ara-panahy tsara ny manana miresaka. Etsy ankilany, tsy tokony hatahotra hiresaka momba ny zavatra fa i Jesosy. Afaka miresaka momba ny fiainana, ary afaka miresaka momba ny fanatanjahan-tena, fotsiny manao izany amin'ny fomba izay manome voninahitra an'Andriamanitra.
Ny sasany aminareo tokony mba tsy hiresaka be loatra sy ny olon-kafa mila manomboka miresaka bebe kokoa. Ny sasany amintsika tokony ho haingana kokoa ny hihaino. Ny sasany amintsika dia tsy mampiasa teny. Ary tokony hataontsika bebe kokoa. Mitenena mafy. Andriamanitra no miasa eo amin'ny fiainanao ary te handre ny momba izany. Aoka ny teninao rehetra dia miavaka amin'ny fitiavana. Ny vavaka ataoko dia CHBC mety ho fiangonana miavaka amin'ny teny feno fitiavana.
Rehefa mikatsaka ny hampihatra izay reny ianao anio alina, aza manao fotsiny ny fahadisoana ny miezaka haharaka ny zavatra lazainao sy marina miezaka ny hanao tsara kokoa. Aza fotsiny ihany hiatrehana izany teo ivelany.
Araka ny hitantsika tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, inona no tehirizina ao am-pontsika mivoaka. Tsy tokony hieritreritra misy elektrônika eo amin'ny fo sy ny lela. Koa mitahiry ny zava-tsoa ao amin'ny fonareo sy mijery azy ireo vokatra. Ary rehefa manao izany, eto dia ny fomba tokony ho miezaka ny hampiasa ny teny.
Ny tena fomba mijery ny teny dia ny mijery ny fonareo izany, satria izy ireo mifandray akaiky. Misy tsipika mivantana avy ao am-po ho amin'ny lela. Tandremo ny fonao, ary ny manao izany, mijery ny Words. Ary izany rehetra izany amin'ny alalan'ny fijerena ny Teny.
francismewa • Novambra 22, 2014 amin'ny 3:10 aho • navalin'i
tsara ny mamaky momba ny lanjan'ny teny . Efa naka teny zavatra tsara avy amin'izany , misaotra anao noho ny teny tsara
manicle • Febroary 3, 2015 amin'ny 3:43 aho • navalin'i
izany no tena awesome. raha ny olon-drehetra mba hamaky, hahatakatra sy hanaraka ny fitsipika, izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa ny miaina ao.
Muskn • Oktobra 24, 2015 amin'ny 9:22 aho • navalin'i
mampiasa teny be dia be
Rita • Novambra 4, 2015 amin'ny 4:25 PM • navalin'i
Izany no lesona iray ara-potoana ho ahy. Niresaka momba io foto-kevitra tena anio alina amin'ny Baiboly. Misaotra an'Andriamanitra noho ny manatona ahy amin'ny tranonkala, ary misaotra an'Andriamanitra noho ny mampiasa anao mba hanazava ny teniny amin'ny fomba izay mazava sy mora azo.
Andriamanitra anie hitahy ny Service!
Barbara • Febroary 5, 2016 amin'ny 6:03 PM • navalin'i
Teny dia zava-dehibe tokoa. tsara Info. Mba maka fotoana mba hitsidika ny tranonkala ho Nampiany koa aho ny fanompoana mba hampianatra ny hafa mikasika ny maha zava-dehibe ny teny.
miresaka momba: Teny ireo, fara fahakeliny, ny antsasaky ny olombelona zava-misy raha tsy ny tena
miresaka momba: 2016 In Review – Ny Job Hunting Experience | The SharePoint Effect
miresaka momba: teny – Banana Wifey
miresaka momba: Torio / fahatsiarovana / James 3 / Herin'ny teny